Sunita Mani Manatevin-daharana an'i Will Ferrell sy Ryan Reynolds ao amin'ny Fanahy ho an'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Ny vaovao voalohany mifandraika amin'ilay sarimihetsika panahy ary Apple TV +, daty nanomboka tamin'ny 2019, iray volana taorian'ny nanombohana ny serivisy fandefasana horonantsary an'i Apple, na dia tamin'izany fotoana izany aza dia fantatra ihany fa Will Ferrell sy Ryan Reynolds Voarohirohy izy ireo, ary ny anaram-boninahitra dia ho Christmas Carol, ny lohatenin'ny hoe toa niova.
Araka ny filazan'ireo tovolahy avy ao amin'ny Deadline, Sunita Mani, mpilalao sarimihetsika fantatra amin'ny anjara asany en Mr. Robot y Mazava, dia ho ampahany amin'ny tetikasa panahy, miaraka amin'i Ryan Reynolds, Will Ferrell ary Octavia Spencer (mpiady amin'ny andiany ho an'ny Apple TV + Lazaina ny marina).
Mani dia hilalao ny lasa, fantatra amin'ny anarana hoe The Ghost of Christmas Past, fampifanarahana mozika an'ny A Christmas Carol nataon'i Charles Dickens, mpanoratra. Ho mozika daholo ny mozika ato amin'ity sarimihetsika ity, ka raha tianao ny mozika dia tokony andramo ity sarimihetsika vaovao ity rehefa manomboka amin'ny Apple TV + izy io.
Ny sarimihetsika dia Notarihin'i Sean Anders, izay hiaraka amin'i John Morris koa dia hanao ny asan'ny mpanoratra. Ao amin'ny sanganasa famokarana dia i Ryan Reynolds miaraka amin'ny orinasam-pamokarana Maximum Effort ary Will Ferrell miaraka amin'ny orinasa mpamokatra Gloria Sanchez Productions (anarana mahaliana). Eo amin'ny famokarana ihany koa i Jessica Elbaum sy David Koplan.
Amin'izao fotoana izao tsy fantatray hoe rahoviana no kasaina hatao ny famokarana, ka tsy mbola afaka mikaroka daty famotsorana isika. Azo inoana fa ity sarimihetsika vaovao ity dia havoaka voalohany amin'ny teatra, farafaharatsiny any Etazonia, ary, herinandro vitsivitsy aorian'izay dia hipetraka amin'ny Apple TV + ho an'ny mpamandrika rehetra maimaimpoana izany.
Araka ny tsaho isan-karazany, mba hahazoana ny zon'ity mozika ity dia nandoa i Apple 60 tapitrisa dolara mahery fotsiny tamin'ny ady an-trano teo anelanelan'ny Netflix, Warner Bros ary Paramount Pictures.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Sunita Mani dia miaraka amin'i Will Ferrell sy Ryan Reynolds ao amin'ny Spirited for Apple TV +